I-Parhelio: kuyini, izici nemvelaphi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esinye sezimo zomkhathi ezixakile kumele kube inqwaba. Kuyisimo sasemkhathini esidalwa yilanga, yize kungabuye kubhekwe njengesimo semvelaphi yezinkanyezi. Imvamisa ivela ngaphansi kwezimo ezithile ezihlukile zemvelo nangesikhathi esifushane.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi iyiphi i-parhelion, ukuthi yakhiwa kanjani nokuthi inamiphi imiphumela.
1 Yini i-parhelion
2 Ngabe i-parhelion ivela nini
4 Imiphumela kanye nemiphumela
Luhlobo lwesimo sasemkhathini esidalwa yilanga. Kungukukhanya okubili okuncane okwakhiwa ezinhlangothini zombili zelanga lapho kukhona uhlobo oluthile lwefu. Izinhlobo zamafu adingekayo ukuze i-parhelion yenzeke yilezo zohlobo lwe-cirrus. Lawa mafu abukeka njengentambo futhi amanye awo abukeka njengama-flakes kakotini. Ukuze lolu hlobo lwezimo zomkhathi zenzeke, lezi zinhlobo zamafu kufanele zibe khona ngoba ziqukethe amakristalu eqhwa asebenza njengama-prism amancane. Lawa makristalu amancane eqhwa anesibopho sokukhipha imisebe yelanga. Lokhu kusho ukuthi bazophambukisela ingxenye yemisebe yelanga baye kwenye indawo eyakha i-parhelion.
Lezi zimo zemvelo zenzeka ngokungavamile ezindaweni ezithile zomhlaba kuphela. Ungasho ukuthi le nto ifana nokubona ilanga ngemuva kwefu kodwa lingakhanyi kakhulu kunelanga langempela. Hhayi njalo lapho lesi simo senzeka ama-parhelios amabili ayabonakala. Imvamisa izikhathi kuba namafu e-cirrus kuphela ohlangothini olulodwa lwelanga bese kuba nama-parhelion kuphela. Angamaphoyinti akhanyayo kuphela we-halo e-iridescent ezungeze ilanga. Kuyaqabukela kakhulu ukuthi i-halo ibonakale ngokuphelele.
Njengoba bekulindelekile, yisimo sasemkhathini esingafani ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi i-parhelion ibonakala njengendawo ekhanyayo eyindilinga. Ngalezi zinhlobo zobunjwa ilanga libukeka lingakhanyi kangako. Ngakolunye uhlangothi, ngezinye izikhathi singathola isici esinwetshiwe sibheke phezulu noma sibola ngemibala yothingo. Kwezinye izikhathi kuphela lapho ungabona izingcezu ezithile ezincane kunothingo lwenkosazana. Kumele ngididanise lezi zingcezu nothingo lwenkosazana ngoba i-parhelion ihlala ivela eceleni kwelanga, ngenkathi uthingo luvela ohlangothini lwesibhakabhaka maqondana nelanga.
Ngabe i-parhelion ivela nini
Kuze kube umzuzu lapho kungekho lutho olwaziwayo ngalesi simo sasemkhathini, akukho lutho lwaso olubhekwayo. Kodwa-ke, lapho sesazi ngobukhona bepharadesi, kulapho siqala khona ukunaka le nto. Ingabonakala kaningi kunokuhlala kwayo. Imvamisa ibonakala kusihlwa noma ekuseni lapho ilanga lingaphansi komkhathizwe.
UParhelion uvame ukuvela ngqo ekuthambekeni kwama-22 degrees ukusuka elangeni, ngenxa ye-engela lapho imisebe yokukhanyisa ikhishwe ngayo. Ungakuthola lokhu. Isibhakabhaka lapho kwenziwa lokhu okulandelayo: into yokuqala ukubeka ingalo yelulwe ngokuphelele ngaphambili nokuvula isandla. Lapho ilanga limbozwe ngesandla siyabona ukuthi iphwele kufanele libe cishe lapho kuchazwa khona ithiphu yomunwe omncane. Kungashiwo ukuthi sikala isibhakabhaka ngentende yesandla sethu. Uma kunamafu e-cirrus kuleyo ngxenye, kungenzeka ukuthi i-parhelion yakheke. Ingatholakala kokubili ngakwesokunene nangakwesobunxele belanga noma kokubili.
Igama elithi parhelio livela esiGrekini para-Helios. Lokhu kungahunyushwa njengokufana nelanga. Yize kuvame kakhulu, kwezinye izikhathi i-parhelion yenyanga nayo ingatholakala. Umphumela uyefana futhi nendlela yokuwuthatha ngokufanayo. Inkinga yalokhu ukuthi kungabonakala kuphela uma kunenyanga egcwele futhi amafu e-cirrus kufanele abekhona ukuze akwazi ukukhipha ukukhanya okuncane okuvela enyangeni.
Yize ingekho yinde kakhulu, lesi simo sibonakala silotshiwe kusukela ezikhathini zasendulo. Isibonelo salokhu ukuthi ibizwa ngegama encwadini yokuqala yeLa República. Lapha singathola abalingiswa abahlukahlukene abahlanganyela engxoxweni yefilosofi. Kule ngxoxo ungabona ukuthi omunye wabalingiswa ubuze kanjani ngesimo sasemkhathini esibonwa edolobheni laseRoma. Lo mkhuba ubizwa ngeParhelio futhi ubhekisa entweni lapho “amalanga amabili” angabonakala khona ngeso lenyama.
Namuhla siyazi ukuthi lokhu akulona iqiniso kusukela lapho Amane nje amakristalu eqhwa anomthwalo wokukhanyisa ukukhanya kwelanga.
Abantu abaningi abazi ukuthi kungani kunalesi simo esenzeka ebusika. Akumangazi ukuthi phakathi nobusika singabhalisa amazinga okushisa angama -20 degrees ezingxenyeni eziningi zomhlaba njengasenyakatho ye-United States. Kulezi zindawo kunendawo ebandayo enezimo ezimbi kakhulu zemvelo ezilungele ukukhuthaza ukwenziwa kwalolu hlobo lwezinto. Ukwakheka kwe-parhelion kudinga ukwakheka kwamakristalu e-ice emafwini e-cirrus.
Kodwa-ke, lama halos ahlobene neze nothingo, njengoba sishilo ngaphambili. Zibonakala njalo eceleni kwelanga, kanti uthingo luvela ngakolunye uhlangothi.
Imiphumela kanye nemiphumela
Ukuthi lesi simo esibonakalayo sisho ukuthini esibhakabhakeni. Yilokho esizibuza kona kakhulu. Iqiniso lokuthi i-parhelion ivela esibhakabhakeni ilindela ushintsho oluthile lwesimo sezulu olungenzeka njengoba isimo sezulu sisondela. Futhi ngukuthi uma sibona inqwaba kungenzeka ukuthi kufika izivunguvungu ezizoletha imvula yesikhashana. Abalimi abaningi abasezindaweni zomhlaba lapho lolu hlobo lomkhuba lungabonakala khona kakhulu yilabo abathatha lesi sithangami njengophawu lokufika kwesimo sezulu esibi. Amafu weCirrus ezindaweni eziningi akhiwa kuphela ezinsukwini ngaphambi kokuvela kweziphepho.
Ngezinye izikhathi, lapho i-halo inesimo esiseqanda kakhulu, kungabikezelwa ukuthi isimo sezulu siyoba sibi esikhathini samahora ayi-12-24.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-parhelion ngezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » UParhelion